Akụkọ - Ememme ngosi Tea International China nke anọ emere na Hangzhou
Site na Mee 21 ruo 25, a na -eme Expo Tea International China nke anọ na Hangzhou, Province Zhejiang.
Tea Expo ụbọchị ise, nke isiokwu nke "tii na ụwa, mmepe na-ekerịta", na-ewere nkwalite mkpokọta ime obodo dị ka ahịrị bụ isi, wee were ike nke akara tii na nkwalite oriri tii dị ka isi, nke ọma. na -egosipụta mmezu mmepe, ụdị ọhụrụ, teknụzụ ọhụrụ na ụdị azụmaahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ tii China, yana ihe karịrị ụlọ ọrụ 1500 na ihe karịrị ndị na -azụ ahịa 4000 na -esonye. N'oge ngosi nke tii, a ga -enwe nzukọ mgbanwe maka ekele nke abụ tii China, ọgbakọ ọgbakọ mba ụwa na tii na West Lake na isi ihe omume ụbọchị tii 2021 na China, ọgbakọ nke anọ maka mmepe nke ọgbara ọhụrụ. Omenala tii ndị China, yana ọgbakọ mmepe obodo maka ime obodo n'afọ 2021.
China bụ obodo nke tii. Tea abanyela n'ime ndụ ndị China wee bụrụ onye na -ebu mkpa nke iketa ọdịbendị China. Ebe nkwukọrịta ọdịbendị mba ụwa nke China, dị ka windo dị mkpa maka mgbanwe na mgbasa nke ọdịbendị nke mba ọzọ, na -ewere iketa na ịgbasa ọdịbendị ọdịnala China mara mma dị ka ebumnuche ya, na -akwalite ma na -akwalite omenala tii na ụwa, ma gosipụtala ugboro ugboro omenala ndị China. na UNESCO, ọkachasị na mmekọrịta omenala na mba ndị ọzọ dị n'ụwa, na -eji tii dị ka onye na -eme enyi, na -eme enyi site na tii, na -eme enyi site na tii, na -akwalite azụmahịa site na tii, tii China abụrụla onye ozi enyi na kaadị azụmaahịa ọhụrụ maka. nkwurịta okwu ọdịbendị n'ụwa. N'ọdịnihu, China International Cultural Communication Center ga -eme ka nkwukọrịta na mgbanwe nke omenala tii na mba ndị ọzọ dị n'ụwa sie ike, nyere aka na omenala tii nke China na -aga mba ofesi, soro ụwa kerịta ịma mma nke omenala tii sara mbara na nke miri emi nke China. ụwa echiche udo nke "udo nke tii na -eduzi" nke otu puku afọ, iji mee ụlọ ọrụ tii oge ochie nwere akụkọ ihe mere eme otu puku afọ ruo mgbe ebighị ebi ma na -esi ísì.
China International Tea Expo bụ ihe omume ụlọ ọrụ tii kacha elu na China. Ebe ọ bụ na Expo Tea mbụ na 2017, ọnụ ọgụgụ ndị sonyere akarịala 400000, ọnụ ọgụgụ ndị na -azụ ahịa ruru ihe karịrị 9600, na ngwaahịa tii 33000 (gụnyere West Lake Longjing green tii, Wuyishan White Tea, jierong akpa akpa wdg. ) agbakọtala. Ọ kwalitere nke ọma imepụta na ịre ahịa, nkwalite akara na mgbanwe ọrụ, yana ngụkọta nke ihe karịrị ijeri yuan 13.